Ogaden News Agency (ONA) – Guulihi kaso hoyday Mudaharadki Camp David: G20 London, Cop 15 Copenhegan, Norwey
Guulihi kaso hoyday Mudaharadki Camp David: G20 London, Cop 15 Copenhegan, Norwey
Waxaa markiiba Ururada Bulshada ee Wadanka Mareykanku ay soo qoreen in Dowlada wadanka USA ay qaadatay inay ka joojinayso mucwamada aan aheyn gargaarka cunada wadanka Ethiopia kadib boqolaal kasoo jeeda Somalida Ogadeniya iyo qowmiyadaha Ethiopia oo isugu soo banaanbaxay guriga Camp David Hortiisa. Mudaharaadkan oo soo jiitay warbaahinta caalamka ayaa waxa kasoo hoyday guulo waaweyn oo qadiyada Somalida Ogadeniya Heerkeeda kor usii qaadaya islamarkaasna lagu ceebaynayo laguna soo xoojinayo Danbiyada uu galay Kaligigii Taliye Zenawi.
Hadaba Guulaha waaweyn ee kasoo hoyday Mudaharadkii ayaa waxaa kamid ah:
Calanka Somalida Ogadeniya oo markale soo fuulay shaashadaha TV-yada laga leeyahay wadanka USA oo dad badan oo Amerikan ah ay barteen qadiyada Ogadeniya.
Mucaawamada lasiiyo Ethiopia oo dib loo eegi doono, Lagana jarayo macaawamo badan oo isugu jirtay military iyo mid lacageedba.
Sidoo kale waxaa markale wajigabax lakulmay Kaligi Taliye Zenawi oo baryootankiisi uu ku raadsanayay dhaqaalaha ayaa noqday mid uu kusoo hungoobay waxaana Wadamada G8 ay goosteen in Ethiopia lasiinin wax deeq ah oo kabaxsan cunada gargaarka bani aadanimo ee dag daga ah. Taas oo micnaheedu yahay in aysan Ethiopia heli doonin taagradi ay ku raadsan jirtay Horumarka iyo dhismaha dowliga sida ciidamada iyo amniga. Kaligi taliye Zanawi ayaa ku hanweynaa innuu shirkan uga faa idyesto sidii dhaqaalaha aan looga jari lahayn isaga oo qorshayaal cusub watay oo uu rabay innuu ku maal gashado Biye xidheen loo raadinayo lacag dhan 4 billion oo dollar oo Ethiopia la’dahay meel ay ka hesho lacagtaas.
Waxaa kale oo warbaahinta caalamku ay aad uga hadashay dhaqalaha uu lunsado males Zenawi iyaga oo wareysiyo ka qaaday dadkii mudaharadayay.
Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ayaa hadiyo jeer ka faa ideysta kulamada noocan oo kale ah iyaga oo Banaanbaxyo Xooggan oo aad u abaabulan kaga hortaga.
Waxaa xasuus mudan banaanbaxi 2009 G8 ee ka dhacay London,
Males Zenawi waqtigaas iyada ah waxaa diiday Obama innuu la istaago Zenawi arrintaas oo waftigii kasocday South Afrika ay sheegeen in Obama u sheegay Zenawi in wadankiisa uu wax kaqabto.
Sidoo kale Waxaa xasuus mudan Banaanbaxi Copenhegan Cop15 ee dhamaadki 2009
Waxaa shirkaas kumanaan shacabka somalida Ogadeniya ahi ay qabow aad u hooseya ay taagnayeen banaanka shirki cop 15. Waxaana ugu danbeyn ay ku guuleysteen in Zenawi ay ceebeyaan iyaga oo warqado ku qeybiya gudaha shirka warbaahinta caalamkana si toos ah loga daawanayay.
Ceebta ugu weyn ee Zenawi shirkaas kasoo gaadhay waxay aheyd markii uu codsaday in lasiiyo 10 Billion oo USD ah. Arrintaas oo madaxda Afrika ay ku sheegeen in Zenawi uu tuug yahay markaasna uu rabo innuu gatto Afrika oo idil. hoos ka daawo madaxdi Afrikanka ee kasoo horjeedsatay waagaas.
Banaanbaxi 2011 ka dhacay Norwey ayaa isna xasuus kale mudan halkaas oo warbaahinta wadanka Norwey ay soo bandhigeen ceebaha Zenawi.
iyo kan oo maanta 2012 Camp David markale looga guuleystay Zenawi. Waxaa xasuus weyn ku reebtay Zenawi oo uu aad u necebyahay Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya oo noqday kuwo xirfad u leh una dhabar adeyga cimilo kasta haddey kuleyl tahay, hadey qabow tahay, hadduu baraf jiro iyo hadii safar dheer loogu baxayo intaba. Waxaa Zenawi soo afjarmaya beenti ay dowladiisu ka gadi jirtay beesha caalamka.